Faah faahin:- Dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada Galmudug iyo Puntland iyo qasaaraha ka dhashay (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada Galmudug iyo Puntland iyo qasaaraha ka dhashay (AKHRISO)
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa qasaaraha ka dhashay dagaal aad u culus oo saakay aroortii ka bilawday xaafada Garsoor ee magaalada Gaalkacyo, kaas oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Dagaalkaasi oo u dhaxeeyay ciidamo kala taabacsan Puntland iyo Galmudug ayaa sida la sheegay bilawday kadib markii ay labada dhinac ku murmeen dhisme lasoo jeediyay in loo sameeyo xoolaha, kaas oo ugu dambeyn ay labada dhinac isku khilaafeen.
Inta la xaqiijiyay waxaa dagaalkaasi ku geeriyootay 5 qof, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay 11 qof kale sida ay inoo xaqiijiyeen dadka degaanka.
Warar hoose oo ay heshay warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegaya in dagaalka uu mar istaagayo, islamarkaana uu dib usoo laba kacleeynayo, taas oo keentay in xiisadda dagaal ee halkaasi ka taagneyd ay sii xoogeysato.
Dhamaan dadkii ku dhaawacmay dagaalkaasi ayaa lagu soo waramayaa in la geeyay xarumaha caafimaad ee magaalada Gaalkacyo, waxayna qaarkood yihiin kuwa qaba dhaawacyo halis ah.
Dhinaca kale, gudoomiyaha magaalada Gaalkacyo ee maamulka Galmudug Xirsi Yuusuf Barre oo la hadlay warbaahinta ayaa ciidamada Puntland ku eedeeyay inay iyagu soo weerareen fariisimaha ciidamada Galmudug, islamarkaana tilmaamay inuu dagaalka haatan ka culus yahay, sidii uu saakay ku bilawday.
Ilaa iyo haatan ma jiro wax war oo kasoo baxay dhinaca maamulka Puntland oo ay kaga hadlayaan eedeymaha loo soo jeedinaayo ciidankooda, waxaana la xasuustaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay hore heshiis nabadeed u dhex-dhigtay labadaasi dhinac sanadkii 2015-ka bisha November, taas oo haatan u muuqata mid fashilantay.